by Udeorah dị oké ọnụ ahịa
Fleeti, mmalite mmalite nke ESTIA nke dabeere na Senegal, ọkachamara na nchịkwa nke ụgbọ ala ụgbọ ala na Africa, nwetara otu nde euro ($ 1.1m) site na Newfund, Janngo, Groupe Clim, Mapinvest, SkalePark, na ndị mmụọ ozi azụmahịa.
Ego a ga-ahụ ka ụlọ ọrụ ahụ gbasaa iru ya n'ahịa ọhụrụ ma mee ngwa ngwa mmepe nkà na ụzụ nke ngwọta ha.
N'ikwu okwu na teknụzụ Fleeti na otu ọ ga-esi kwalite ọrụ njikwa ụgbọ ala, CEO Iban Olçomendy, kwuru:
"Ọtụtụ oge, geolocation bụ ihe mbụ na-abata n'uche mgbe ị na-eche maka njikwa ụgbọ mmiri. Ọ bụ ihe dị mkpa dị mkpa maka nyocha, mana ezughị ezu ma na-enyekarị ụlọ ọrụ obere uru. Site na teknụzụ Fleeti, azụmahịa nwere ike ịghọta nke ọma ike data sitere na ọrụ ha. "
Ewezuga izipu data raw na ndị ahịa, anyị na-enyekwa ha ndụmọdụ dịka ngalaba ha na-arụ ọrụ si dị, ọ gbakwụnyere.
Onye njikwa mmepe na Newfund NAEH, Agathe Descamps, kwuru:"Ọkachamara na ọchịchọ nke ndị malitere na nkwenye anyị nwere ike ime ngwa ngwa n'Africa mere ka anyị kwenye itinye ego na ịkwado ụlọ ọrụ a na mmepe ya."
Newfund bụ nde euro 250 ntinye ego mmalite nke mkpụrụ ego French na-arụ ọrụ na United States. Tọrọ ntọala na 2008 site n'aka François Véron na Patrick Malka, bụ ndị ụlọ ọrụ ezinụlọ na ndị ọchụnta ego na-akwado maka mmepe azụmaahịa.
Aircall, Fairmarkit, In2Bones, na Eqinov so na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 100 ndị sonyere Newfund na-arụsi ọrụ ike na 2021. Ole na ole n'ime ego ọpụpụ pụtara ìhè gụnyere; Ụlọ Luckey (nke Airbnb nwetara), Beyond Ratings, na Medtech SA (nke Zimmer Biomet nwetara), Na mgbakwunye, ọ bụ naanị ego mkpụrụ nke France na-arụ ọrụ na United States.
E hiwere Fleet na Julaị 2020 site n'aka Iban Olçomendy na Gabriel Delerue (ha abụọ EDHEC grads). Ọ na-achọ inyere ụlọ ọrụ aka ibelata oriri mmanụ ma mee ka ụgbọ mmiri ha rụọ ọrụ n'ọkwa kacha mma.
N'iji ihe mmetụta agbakwunyere na ngwanrọ SaaS, teknụzụ ya na-eme ka nchịkọta data dị mfe na nyocha, na-enye ohere ka ụlọ ọrụ nweta KPI doro anya na ọrụ ha. Ebunyelarị ihe ngwọta Fleet na mba Africa anọ (Senegal, Ivory Coast, Ghana na Mauritius)